Waa maxay naqshadeynta garaafyada dhijitaalka ah? | Hal-abuurka Online
Waa maxay naqshadeynta garaafyada dhijitaalka ah?
La dejintaANCia del u sheegño gráfico, en el mundaro dhabta ah, es un leeyahaya in waaá en boca de ilaado el mundaro. Y maya es waayo, ragos, ya in, en la dhabta ahtay, shirkadaha, sumadaha, ururada iyo machadyadu waxay si aad ah iyo aad u badan u siinayaan naqshadaynta garaafyada, y uu badanas las qofas in se gooyaanican con profesilbaxnimotay y gooyaanicacion a tan qaybta.
Naqshadaynta garaafku waa qayb taas oo, aad iyo aad u badan, shaqada xirfadlayaasha iyo ardayda ee goobtan waa lagama maarmaan, tan iyo, mar kasta, warbaahinta, advertising, blogs, codsiyada web iyo shabakadaha ka mid ah kuwa kale, ay noqdaan kuwo aad u badan oo nool bulshada. Gudaha qeexiditiva, naqshadeynta garaafyada ayaa si sii kordheysa uga jirta nolol maalmeedkeena, tanina waxay noo horseedaysaa inaan ku soo gabagabeyno in muhiimada ay u leedahay nolosheena ay sii kordheyso. Maqaalkan waxaan ku sharxi doonaa waxa uu yahay naqshadeynta garaafyada dhijitaalka ah; waxaanan ku tusi doonaa kala duwanaanshaha ugu weyn ee naqshadeynta garaafyada dhaqameed.
1 Waa maxay naqshadeynta garaafyada dhijitaalka ah?
2 Farqiga u dhexeeya naqshadaynta garaafyada iyo naqshadaynta garaafyada dhijitaalka ah
2.3 Foomka lagu shaqeeyo
2.4 Fursadaha shaqo
Naqshadaynta garaafyada dhijitaalka ah waa isticmaalka xirfadaha farsamada iyo qalabka naqshadaynta dhijitaalka ah abuurista muuqaal, otros walaxetos y texto usiyo kombiyuutarada. Nidaamkan naqshadeynta ayaa diiradda saaraya naqshadeynta garaafyada ee warbaahinta dhijitaalka ah. Naqshadani waxay noqotay mid caan ah oo ay ugu mahadcelinayaan bogagga shabakadda, blogs iyo shabakadaha bulshada. Waa hagaag, tani waa meesha naqshadeeyayaasha garaafyada ay ku tusi karaan shaqadooda oo ay la xiriiri karaan macaamiisha iyo shirkadaha shaqada mustaqbalka.
En años recIentes, el u sheegño gráfico digital ha gashorbuuqaysaan badana caanka ahtay, y la inatiltay de las iyadawanIentas digitales ha ogolaanshahatagay in se oo ka mid ahardoorkale una nueva áRea del u sheegño gráfcalaamad. Halkee ka proycos puden llugtaar a Ser dhabta ahmaskaxdae hal abuurivos. Markii hore, naqshadeynta garaafyada waxaa loo arkay waxqabad ka kooban qancinta baahiyaha macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, maanta, qeexidani waa is beddeshay. Maanta, wuxuu diiradda saarayaa xallinta dhibaatooyinka isgaarsiinta iyo caqabadaha.
DifErencias ENTre u sheegño gráfico y u sheegño gráfico digital
En un mabda 'io se han usbuuqaysaan las kumuunayaashaabras u sheegño gráfico y u sheegño garaafka dhijitaalka ah waayo, qeexidir la isku mida profEsion. despuiyo, con el paso del tiempo, han apwaactagay otras in han hecho in se difErencien. by ejeplo, naqshadeynta garaafka waa anshax faneed ku salaysan hab-abuureed. by otro lbuuqaysaan, el Naqshadaynta garaafyada dhijitaalka ah waa farsamada naqshadaynta garaafyada taas oo ku saleysan adeegsiga warbaahinta dhijitaalka ah.
Marka la soo koobo, naqshadeynta garaafyada lafteedu waa abuur farshaxan, halka dhijitaalku yahay farsamo ku saleysan adeegsiga aaladaha dhijitaalka ah. Waxa si weyn isu bedelaya waa deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxaa jira afar farqi oo cad oo u dhexeeya:
Naqshadaynta garaafyada dhaqameed, waxaan helnaa warbaahinta daabacan. Markaa mid ka mid ah taageerada ugu weyn waa warqad, ha ahaato xayaysiis daabacan, xayaysiisyo ama buug-gacmeedyo. Daabacaaddaan, qaab aan ahayn dhijitaal ayaa loo baahan yahay waana CMYK. Noocan ah, naqshadeeyayaasha waxay tijaabin karaan daabacaadda si ay u hubiyaan inay yihiin midabada saxda ah.
Halka dhijitaalka ah, qaabka midabku waa RGB. Maadaama ay ku shaqeeyaan qalabyada iyo barnaamijyada dhijitaalka ah, iyo kormeerayaashu waa in la hagaajiyaa si aysan u dhicin khaladaad mustaqbalka ah ee muuqaalka shaqooyinka.
La mid maaha in la soo jiito daawadayaasha soo jiitay warbaahinta jireed sida dhijitaalka ah. Kuwa hore waa in ay sameeyaan aragti hore oo wanaagsan si ay isugu dayaan in ay soo jiitaan dadweynaha oo ay soo jiitaan dareenkooda. Ka dambe waa inuu ka dhigaa daawadayaashaada bartilmaameedka ah inay hayaan dareenkooda intii suurtagal ah. Si ay u booqdaan mareegahaaga, shabakadaha bulshada ama blogyada si ay ugu dambeyntii u iibsadaan alaabtaada ama adeegyadaada.
Foomka lagu shaqeeyo
El u sheegño gráfico digital ha cAmbibuuqaysaan by dhameystirilaa la laberey en in ka u sheegñadsaliid gráficos trabajan. Xilligan cusub ee naqshadeynta garaafyada, naqshadeeyayaasha garaafyada maaha inay waqti badan ku qaataan ka shaqeynta warqadda, maadaama shaqada si toos ah loogu sameeyo shaashadda kumbuyuutarka. Habka dhaqameed, naqshadeeyayaasha garaafyada waxay ku naqshadeeyaan warqad iyo qalin.
Muuqaalka farsamooyinka dhijitaalka ah ayaa beddelay qaabkiisa shaqo. Hadda waxaa la isticmaalaa barnaamijyada software-ka, sida xirmada Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign…). Warbaahinta dhijitaalka ah, waa inaad la shaqeysaa cabbirro horay loo sii qeexay si aad ula qabsato shuruudaha codsiyada, bogagga internetka iyo xayeysiisyada dhijitaalka ah.
Labada naqshadeeyayaasha ayaa maanta baahi weyn u qaba suuqa shaqada. Waxay kuxirantahay takhasuska, naqshadeeyayaasha garaafyada dhaqameed waxay diirada saari doonaan inay ka shaqeeyaan shirkadaha u heellan daabacaadda warbaahinta. Halka naqshadeeyayaasha garaafyada dhijitaalka ah ay noqon doonaan kuwo aad ugu qalma inay ka shaqeeyaan shirkadaha dhijitaalka ah, sida wakaaladaha xayeysiinta dhijitaalka ah, istuudiyaha naqshadaynta, iwm.
El trabtoonta loo baahan yahaytag de hal abuurividad, así in waao lo hxiddiga un puwaao shaqo in pude llugtaar a Ser muy bilaashaificante. Haddii waxa aad rabto ay tahay xirfad aad u badan oo leh fursado horumarineed oo ballaadhan, shaki la'aan tani waa adiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Waa maxay naqshadeynta garaafyada dhijitaalka ah?
Waa maxay calaamadaynta?